Nepalistudioकतै श्रीमती आफूसँग दिक्क भैसकेकी पो छिन् कि ? कसरी थाहा पाउने ? यस्ता छन् उपाय - Nepalistudio
कतै श्रीमती आफूसँग दिक्क भैसकेकी पो छिन् कि ? कसरी थाहा पाउने ? यस्ता छन् उपाय
यी संकेत ससाना हुन्छन् र सामान्यतः यिनीहरूप्रति त्यति ध्यान दिइँदैन । जसै समय चिप्लँदै जान्छ, घर तथा अफिसको काममा डुब्न थालिन्छ र श्रीमान्-श्रीमतीबीच एकअर्काका लागि समय दिन असमर्थ भइन्छ । घरव्यवहार तथा बालबच्चाका कुराका अतिरिक्त अन्य समस्याका विषयमा छलफल हुन्छ तर दम्पतीका निजी जीवनसँग सरोकार रहेका विषयले कुराकानीमा समेत प्रवेश पाउन मुस्किल पर्छ । फलतः प्रेम विषयक चर्चा नहुँदानहुँदै आपसी सम्बन्ध निष्प्राण बन्न पुग्छ । पहिलेजस्तो प्रेम व्यक्त गर्दाको अवस्थामा हुने जोस, घबराहट एवं आत्मीय झनझनाहट सेलाउनपुग्छ अनि सम्बन्ध बोझ बन्न थाल्छ । यसरी श्रीमतीले प्रेम गर्न छोडिन् र वैवाहिक जीवनबाट सन्तुष्ट भइनन् भने सम्बन्धमा धोका हुने सम्भावना वृद्धि हुन्छ । अतः समय छँदै चनाखो भएर यस्तो स्थिति पैदा हुने अवस्था आउन नदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । तपाईले एक पटक आफ्नो समस्या पहिचान गर्नुभयो भने त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो दाम्पत्य जीवनलाई पहिलेकै जस्तो सुमधुर बनाउन सक्नुहुन्छ ।
आपसी सञ्चार कुनै पनि सम्बन्धका लागि अपरिहार्य मानिन्छ । स्वस्थ सम्बन्धमा बाँधिएका जोडीहरू आफ्नो जीवनका हरेक कुरा एकअर्कासँग व्यक्त गर्छन् । उनीहरूको कुराकानीका क्रममा एकअर्काको साथमा कस्तो महसुस गर्छन्, एकअर्कासँग कति प्रेम गर्छन् भन्ने कुरा प्रकट हुन्छ । यसबाट भावनात्मक एवं शारीरिक सम्बन्धको डोरी कसिलो हुन थाल्छ । तर, श्रीमान्-श्रीमतीका बीच बालबच्चा तथा घरखर्चको कुरा मात्रै हुन थाल्यो भने बुझ्नुहोस्- अब सम्बन्ध दिगो हुन सक्दैन, जीवनसाथी तपाई प्रति आकर्षिर्त छैनन् । यस्तो स्थितिमा तुरुन्तै सम्हालिएर सम्बन्धलाई लाइनमा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि तपाईं उनलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो बताउनुपर्छ । यति गरे बिग्रन आँटिसकेको सम्बन्ध निश्चय नै ठीक बाटोमा आउनेछ ।
जीवनसाथी प्रायः आफैंमा डुबिरहन्छिन् भने सचेत हुनपर्छ । जीवनसाथीको अर्थ नै एकअर्काको ख्याल राख्नु हो । तर उनी केवल आफ्नै हितका विषयमा सोचमग्न हुन्छिन् भने बुझ्नुपर्छ कि अब उनका लागि यो सम्बन्धमा प्रेमका निम्ति कुनै स्थान छैन । उनी समय-समयमा तपाईंलाई अपमानित गर्छिन् भने होच्याउन पाइने कुनै पनि क्षण गुमाउँदिनन् । जब कि प्रेमपूर्ण सम्बन्धको पहिलो शर्त नै आपसी सम्मान हो । यसरी सम्मानका स्थानमा अपमान प्राप्त हुन थाल्यो भने बुझ्नुहोस्- तपाईंको दाम्पत्य जीवन धरापमा छ, तपाईहरूको सम्बन्धमा सर्वथा प्रेमको अभाव छ, जुन तपाईंका लागि खतराको घन्टी हो ।
विवाहपछि सबैमा परिवर्तन आउँछ, सामान्यतः यस्तो परिवर्तन सकारात्मक नै हुने गर्छन् । हरेक राम्रा पार्टनरले दाम्पत्य सम्बन्धका लागि योगदान दिन्छन् र आफ्नो साथीअनुसार आफूलाई बदल्ने प्रयास गर्छन् जुन आपसी सम्बन्धमा प्रेम छ भने मात्रै सम्भव हुन्छ । आपसी प्रेम रहेन भने सम्बन्धमा विष घोलिन पुग्छ । तपाईले आफूमा खराब बानी देख्न, हानिकारक परिवर्तन भएको पाउन तथा पथभ्रटताको लक्षण भेट्टाउन थाल्नुभयो भने बुझ्नुपर्छ- यो श्रीमतीले आफूलाई गरेको उपेक्षा एवं आफूप्रति उनको उदासीन व्यवहारका कारण भएको हो ।
प्रकाशित मिति :- २७ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०९:३२